नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा चन्द्रप्रसाद ढकाल विजयी — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा चन्द्रप्रसाद ढकाल विजयी
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा चन्द्रप्रसाद ढकाल विजयी
काठमाण्डौ । निकै कडा प्रतिस्पर्धाका बीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा चन्द्रप्रसाद ढकालले जित हासिल गरेका छन् ।
भर्खरै सम्पन्न मतगणनाअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका प्रत्यासी ढकालले जित हासिल गरेका हुन् ।
निर्वाचन समितिका अनुसार ढकालले ५४।२६ मत ल्याएर जित हासिल गरेका हुन् । उनका प्रत्यासी प्रधानले ४५।७४ प्रतिशत मत मात्र ल्याए ।
ढकालले ५० प्रतिशत मतभार रहेको जिल्लानगरबाट आफ्ना प्रत्यासी किशोर प्रधानभन्दा १ मत मात्र काम पाए । तर, ३० प्रतिशत मतभार रहेको एशोसिएट र २० प्रतिशत मतभार रहेको वस्तुगततर्फ भने प्रधानलाई केही फराकिलो अन्तरले पछार्न सफल भए ।
जिल्लानगरतर्फ खसेको कुल १०५ मतमध्ये ५३ मत किशोर प्रधानले पाएका थिए भने ५२ मत चन्द्र ढकालले पाएका थिए ।
यस्तै, वस्तुगततर्फ ढकालले ५९ मत प्राप्त गरेका थिए भने किशोर प्रधानले ३९ मत प्राप्त गरे । यसरी वस्तुगतमा चन्द्र ढकालले कुल खसेको मतको ५८।४१ प्रतिशत, किशोर प्रधानले ३८।६१ प्रतिशत मत प्राप्त गरे ।
वस्तुगतर्फ १०१ मत खसेको थियो । जसमध्ये ३ मत बद्धर भएको थियो । यो समूहतर्फको मतभार २० प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी, एशोसिएटतर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि खसेको मतगणना गरिएको थियो । जसअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्वार चन्द्र ढकालले ५२२ मत पाए । उनका प्रत्यासी किशोरकुमार प्रधानले ३७४ मत मात्रै पाए । यसरी एशोसिएटतर्फ चन्द्रप्रसाद ढकालले कुल खसेको मतको ५८।०६४ प्रतिशत मत पाएका छन् भने प्रधानले ४१।६० प्रतिशत मत पाएका छन् । ०।२२२ प्रतिशत मत बद्धर भएको छ ।
एशोसिएटतर्फ खसेको कुल ८९९ मतमध्ये २ मत बद्धर भएको थियो । यसतर्फको मतभार ३० प्रतिशत हो ।
एशोसिएटतर्फको उपाध्यक्षमा पनि चन्द्रप्रसाद ढकाल प्यानलका रामचन्द्र संघाई विजयी भए । यस्तै, जिल्लानगरतर्फका उपाध्यक्ष पदमा प्रधान प्यानलका दिनेश श्रेष्ठ र वस्तुगततर्फ पनि प्रधान प्यानलकै अञ्जन श्रेष्ठ विजयी भए ।
जिल्लानगरबाट कार्यसमिति सदस्यमा प्रधान समूहका बहुसंख्यक उम्मेद्वार विजयी भए । वस्तुगततर्फ दुवै पक्षका बराबर सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।
एशोसिएटतर्फका सदस्य पदमा पनि मिश्रित परिणाम आयो ।
२०७७ मंशिर १४ गते ०६:०९ मा प्रकाशित
गोल्छा र प्रधान समुहको निष्कर्ष : ७५ प्रतिशत मत सहित सिङ्गो प्यानलनै निर्वाचित हुने
नेप्सेले गर्यो दुई वाणिज्य बैंक सहित ४ कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौंमा आज बिहानै विष्फोट
इन्स्योरेन्सको सेयर छ ? पाउँदै हुनुहुन्छ २० प्रतिशत बोनस सेयर !
फेरि थपिए ४५ जना कोरोना संक्रमित